Iifoto ZaseWarwick (Ukususela NgoSeptemba Ukuya Kutsho NgoDisemba 2014)
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBasque IsiBhulu IsiCebuano IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
Kwezi foto, kuboniswa umsebenzi osele wenziwe kwikomkhulu elitsha lamaNgqina KaYehova phakathi kukaSeptemba noDisemba 2014.
Isakhiwo saseWarwick siphelele. Ukusuka kwisakhiwo esisekoneni phezulu ekhohlo:
NgoSeptemba 11, 2014—INdawo Yokumisa Iimoto Zeendwendwe
Uphahla lweentsimbi olusele lwenziwe kwangaphambili lwesakhiwo C.
NgoSeptemba 18, 2014—Isiza saseWarwick
Icala elisemazantsi, elijonge kwichibi iSterling Forest Lake (iBlue Lake). Izilenge eziyi-13 zisebenza ngaxeshanye. Kulo mhlaba ungaphambili, kugalelwa udaka lomgangatho wesakhiwo B.
NgoSeptemba 26, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi
Iintsika zentsimbi ezilungele ukugxunyekwa. Indlela eziza kugxunyekwa ngayo ezi ntsika kwisakhiwo seeOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi iza kubangela ukuba sivuleke, futhi sikhawuleze sigqitywe.
Ngo-Oktobha 9, 2014—Isiza saseWarwick
Abasebenzi badibanisa uphahla olupheleleyo lwesakhiwo C. Ngasemva nasekhohlo, kwakhiwa icala lophahla.
Ngo-Oktobha 15, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi
Abakhi bagxumeka iintsika kwikona engasekhohlo kumva wesakhiwo. Kweli cala lesakhiwo kuza kubakho ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlamba impahla namanye amasebe.
Ngo-Oktobha 15, 2014—Isiza saseWarwick
Kugqithiswa umtshayelo kumsébenzi ofaka imibhobho yamanzi angcolileyo.
Ngo-Oktobha 20, 2014—Isiza saseWarwick
Olu donga lokwexeshana lakhiwe ngenjongo yokubona indlela olunokudityaniswa ngayo, umbala nendlela yokubeka izitena enokusetyenziswa. Lalikwasetyenziswa ngenjongo yokubonisa abakhi abafikayo. Luyadilizwa xa sele kugqityiwe ngalo.
Ngo-Oktobha 31, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala
Icala lophahla linyuswa ngesilenge. Xa ukude, izakhiwo zokuhlala zibonakala zintle gqitha emacaleni.
NgoNovemba 7, 2014—INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali
Kufakwa itanki lamafutha eliziilitha eziyi-95 000. Amafutha akula matanki aza kusetyenziswa koomatshini bokubilisa.
NgoNovemba 12, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala
Icala elingasezantsi, yiBlue Lake le ivele pha ngasemva ekunene kwefoto. Ngaphandle udonga luhonjiswe ngemibala engafaniyo.
NgoNovemba 21, 2014—INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali
Isibini sifaka imibhobho yamanzi silungiselela ukuba kwenziwe umgangatho.
NgoNovemba 28, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi
Kususwa ikhephu phezu kwendlu.
NgoDisemba 1, 2014—INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali
Esiny’ isibini sihlola iplani yokufak’ imibhobho.
NgoDisemba 10, 2014—INdawo Ekulungiselwa Kuyo/INdawo Yokumisa Iimoto Zabahlali
Kuyombiwa, kugalelw’ udaka kusina ikhephu kunjalo. Kwikona ephezulu ekhohlo, iindawo ezithile kwisakhiwo seeOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi zigqunywe ngeplastiki ukuze imisebenzi engadibaniyo nobumanzi, njengokugalelwa kodaka nemisebenzi eyenziwa ngomlilo, iqhubeke nasebusika.
NgoDisemba 12, 2014—ISakhiwo D Sokuhlala
Abasebenzi batyabeka iintsika ngaphambi kokuba kugxunyekwe udonga.
NgoDisemba 15, 2014—Isiza saseWarwick
Ifoto ethathelwe phezulu. Izindlu zokuhlala zipha phezulu. Isakhiwo esimhlophe embindini wefoto ziiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi. Ulwakhiwo aluthathanga mhlaba ungako, nto leyo ebangela ukuba ihlathi eliselumelwaneni lingaphazamiseki.
Ifoto ethathelwe phezulu kwicala elingasekhohlo, ebonisa isakhiwo C sokuhlala nesakhiwo D ngakumzantsi wefoto. Kwisakhiwo C sokuhlala, kusagqityezelwa uphahla.
NgoDisemba 25, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala
Umchweli wondlala amaplanga kwindlu eyenziwe ngenjongo yokubonisa. Zine iindlela ekucetywe ukuba zikhangeleke ngayo izindlu ngaphakathi, ndlu nganye iza kuba nendlela yayo. Ziquka umbala wepeyinti, ikhaphethi, amaplanga aphantsi, iithayile nomphezulu wetafile yasekhitshini.
NgoDisemba 31, 2014—IiOfisi/ISakhiwo Sendawo Yokuhlamba Iimpahla, Eyokutyela Nekhitshi
Udaka lomgangatho lugqityezelwa ngezandla ukuze uthambeke uzokwazi ukuchitha amanzi.
NgoDisemba 31, 2014—ISakhiwo C Sokuhlala
Inkonde eneminyaka eyi-77 elichule kwizinto zombane ifaka intambo yombane. Ekupheleni komsebenzi, kuza kube sekufakwe intambo enje eziikhilomitha eziyi-32.